Hotel Ice na ụwa maka ahụmịhe dị iche | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | ulo, General, Oge ntụrụndụ
Youtụleela mgbe ị ga-anọ na a Hotellọ nkwari akụ? Ọfọn, anyị chere na ọ bụ nnukwu echiche, ụzọ iji nwee ọmarịcha ahụmịhe dị iche, na ụlọ nkwari akụ sub-efu, nke ice gbara gburugburu ma na-eme ihe dị iche iche. N'ihi na n'ime ụlọ nkwari akụ ndị a, ọ bụghị nanị na ha ga-ahapụ gị ka ị hie ụra, mana ha karịrị akarị, ọtụtụ ahụmịhe ị ga-ebi.
na icelọ nkwari akụ Ha abụghị ndị nkịtị, ọkachasị n'ihi na ha chọrọ ọnọdụ ụfọdụ ka echekwaa, yabụ imirikiti anaghị adị na-emeghe n'afọ niile, mana naanị n'oge oge oyi. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ gburugburu ụwa nke nwere ike ịmasị nke ukwuu, yabụ buru n'uche na ọ bụrụ na ị nọ gị nso.
1 Obodo Igloo Kakslauttanen na Finland
2 De Glace na Québec, Canada
3 Nkwari akụ na Jukkasjärvi, Sweden
4 Obodo Nta Snow na Kittilä, Finland
5 Balea Lac Ice na Romania
6 Sorrisniva Igloo Hotel na Norway
7 Obodo Igloo Blacksheep na Macto-la-Plagne, France
8 Kirkenes Snowhotel na Sor-Varanger, Norway
9 Igloo Hotel na Grandvalira, Andorra
Obodo Igloo Kakslauttanen na Finland
Ebe obibi a yiri ka ọ bụ otu n'ime ịhụnanya kachasị na Lapland niile. N'ezie, obughi ubochi obula i ghahu ihu igwe ugwu ka o dinara n’elu akwa n’ime igwe emebere na snow. Ebe obibi ndị a nwere igloos dị iche iche nwere iko ugele iji ghọta echiche nke mbara igwe ahụ ma ghara ịhapụ ọkụ ọkụ ugwu. Obodo Santa Claus dị nso, iji leta ya nleta, a na-arụkwa ọrụ ndị ọzọ, dị ka ịgba ọsọ ma ọ bụ ịkụ azụ, n'ezie, na ice.
De Glace na Québec, Canada
Icelọ nkwari akụ a bụ ihe a ma ama na Quebec, na ọ bụ naanị nkeji iri site na obodo ahụ. Nke a bụ ụlọ nkwari akụ dị ịtụnanya, n'ihi na kwa afọ mgbe oyi na-abịa ọ na-ewu ya n'ime izu ole na ole ma na-emeghe site na Jenụwarị ruo na njedebe nke Machị, mgbe mmiri na-abịa. Nature na-ekwe ka ọ na-agba ọsọ ya ma gbazee ụlọ nkwari akụ ahụ. Kwa afọ a na-echepụta isiokwu na ụzọ isi chọọ ụlọ nkwari akụ ahụ mma, yabụ oge ọ bụla ga-adị iche. N'ime ya ị nwere ike ịchọta a uka agbamakwụkwọ ihe ịtụnanya na akpụrụ mmiri. A ga-achọpụta ndị ọzọ kwa afọ.
Nkwari akụ na Jukkasjärvi, Sweden
Hotellọ nkwari akụ a na Sweden bụ ụlọ nkwari akụ mbụ ice ọ wuru ihe dị ka afọ 25 gara aga. Ọ dị nso na Arctic Circle ma nwee otu nnukwu ice ice. Ihe ọ bụla bụ akpụrụ mmiri, ọbụnadị akwa akwa, nke bụ akpụrụ mmiri kpuchie fursụ ụra. N'ime anyị ga-anọ na mwepu ise iji debe ice ahụ na ụlọ nkwari akụ ị nwere ike ịnụ ụtọ ihe osise ephemeral nke ndị omenkà na-akpụ akpụ na-atọ ndị ọbịa ụtọ.
Obodo Nta Snow na Kittilä, Finland
Hotellọ nkwari akụ a dị na Lapland nke Finnish ọ bụkwa ebe obibi wuru dị ka obodo nta, nke nwere ọwara nwere ọkụ nke na-eduga n’ebe ndị kachasị ebi ndụ. Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ andụ na ụlọ mmanya na ice na ọbụna ụlọ ịgba egwu nke gị. Enwere sauna dị n'okpuru ala n'ime ụlọ nke na-ekpo ọkụ maka ndị niile na-atụ oyi.
Balea Lac Ice na Romania
Ọ bụghị ụlọ nkwari akụ niile dị na Finland, nke a bụ otu nke mbụ site na Eastern Europe. Balea Lac Ice, ụlọ nkwari akụ ice n'akụkụ Osimiri Balea. Taa ọ bụ ụlọ nkwari akụ ebe ọ bụghị naanị na ọ ga-ekwe omume ịnọ na ice, mana ọ nwekwara ugwu skips, ụlọ oriri na ọ iceụ ice, ụlọ mmanya na ụlọ ụka. Kwa afọ, a na-ewu ya site na isiokwu dị iche iche, iji nye ndị ọbịa ihe ọhụụ.
Sorrisniva Igloo Hotel na Norway
Na mben Akpa AltaNa Norway, ị ga-ahụ ụlọ nkwari akụ a. Hotellọ nkwari akụ a na-enyekwu nzuzo, ọ bụghị nnukwu ka ndị ọzọ mana ọ lebara anya nke ọma. N'ụtụtụ, ị nwere ike ịnụ ụtọ sawụna ahụ iji kpoo ọkụ, ma n'ehihie, enwere ọtụtụ ihe omume, dị ka njem na snowmobiles ma ọ bụ na ịnyịnya ibu.
Obodo Igloo Blacksheep na Macto-la-Plagne, France
Ebe ọ bụ na ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịkwado njem anyị na Finland ma ọ bụ Alaska, anyị nwekwara ụfọdụ atụmatụ dị nso. Hotellọ nkwari akụ a dị na France, na mpaghara Savoie. Ọ bụ nnukwu ihe na mma obodo mee igloos.
Kirkenes Snowhotel na Sor-Varanger, Norway
Na Norway, n'ókè ya na Russia, bụ ndị Kirkenes. Nwere ike iri nri n'ime ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na-anọ na fjords, rute n'ọdụ ụgbọ elu na a husky sled ma nwee ọkụ n’ebe ugwu. Wholewa zuru ụwa ọnụ nke ahụmịhe na ụlọ nkwari akụ nke ndị ọkachamara na-ese ihe na-ese kwa afọ.
Igloo Hotel na Grandvalira, Andorra
Nke a bụ kacha nso ice nkwari akụ na anyị ga-achọta, ọ dịkwa na Andorra. Ọ bụ obere ntụnye, ebe ọ bụ naanị nwere ụlọ isii, mana enweghị obi abụọ anyị na-etinye ya n'ihi na ọ bụ atụmatụ kacha nso anyị nwere. Nwere ike ihi ụra na akpa na ajị anụ na ime ụlọ ice nwere ụdị ọkpụ. Ọ bụghị ihe ọjọọ niile na-amalite na ice hotel ahụmahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Hotel Ice na ụwa maka ahụmịhe dị iche
5 gọọmenti rụrụ na Berlin